Mkpughe E Kpugheere Jọn 6:1-17
6 Ahụkwara m mgbe Nwa Atụrụ ahụ+ meghere otu n’ime ihe asaa ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ,+ nụkwa ka otu n’ime ndị mmụọ ozi anọ ahụ*+ ji olu na-ada ka égbè eluigwe kwuo, sị: “Bịa!” 2 Ahụkwara m ịnyịnya na-acha ọcha.+ Onye na-agba ya jikwa ụta. E nyekwara ya okpueze,+ ya agaa ka ọ na-emeri ndị iro ya nakwa ka o merie ha ruo n’isi.+ 3 Mgbe o meghere nke abụọ n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ, anụrụ m ka mmụọ ozi nke abụọ+ sịrị: “Bịa.” 4 Ịnyịnya ọzọ nke na-acha uhie uhie* wee pụta. E nyekwara onye na-agba ya nnukwu mma agha nakwa ikike iwepụ udo n’ụwa ka ndị bi na ya gburịtawa ibe ha.+ 5 Mgbe o meghere nke atọ n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ,+ anụrụ m ka mmụọ ozi nke atọ+ sịrị: “Bịa.” Ahụkwara m ịnyịnya ojii, nke onye na-agba ya ji ihe gbara mkpị e ji atụ̀ ihe n’aka ya. 6 Anụrụ m ihe dị ka olu si n’etiti ndị mmụọ ozi anọ ahụ.* Olu ahụ sịrị: “A na-ere otu kwọt* nke ọka wit otu mkpụrụ ego dinarịọs.*+ A na-erekwa kwọt atọ nke ọka bali otu mkpụrụ ego dinarịọs. Emebikwala mmanụ oliv ma ọ bụ mmanya.”+ 7 Mgbe o meghere nke anọ n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ, anụrụ m ka olu mmụọ ozi nke anọ+ sịrị: “Bịa.” 8 Ahụkwara m ịnyịnya ahụ́ ya na-acha ntụ ntụ. Aha onye na-agba ya bụ Ọnwụ. Ili* sochikwara ya azụ. E nyekwara ha ikike ịchị otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ụwa, ka ha jiri ogologo mma agha, ụkọ nri,+ ọrịa ọjọọ, na anụ ọhịa na-egbu ndị mmadụ.+ 9 Mgbe o meghere nke ise n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ, ihe m hụrụ n’okpuru ebe ịchụàjà+ bụ ọbara*+ nke ndị e gburu n’ihi na ha na-eme ihe Chineke kwuru nakwa n’ihi ozi ọma ha nọ na-ezisa.+ 10 Ha wee jiri oké olu tie mkpu, sị: “Ọkaakaa Onyenwe anyị, onye dị nsọ na onye eziokwu,+ olee mgbe ị ga-ekpe ikpe ma bọọ ọbọ ọbara anyị n’isi ndị bi n’ụwa?”+ 11 E nyekwara onye ọ bụla n’ime ha otu uwe mwụda na-acha ọcha.+ A gwakwara ha ka ha zutụkwuo ike, ruo mgbe ọnụ ọgụgụ ndị ohu ibe ha na ụmụnna ha ga-ezu ezu, bụ́ ndị a na-aga igbu otú e gburu hanwa.+ 12 Ahụkwara m mgbe o meghere nke isii n’ime ihe ndị ahụ e ji aka ihe akara e ji mechie akwụkwọ mpịakọta ahụ. E nwekwara oké ala ọma jijiji. Anyanwụ jikwara oji ka ákwà iru uju e ji ajị anụ kpaa. Ọnwa chakwara ka ọbara.+ 13 Kpakpando ndị dị n’eluigwe dakwara n’ala dị ka mgbe mkpụrụ fig na-achaghị acha si n’osisi ya na-adapụsị mgbe oké ifufe na-aṅagharị ya. 14 E wepụrụ eluigwe otú e si ewepụ akwụkwọ mpịakọta a fụkọtara afụkọta.+ E wepụkwara ugwu niile na agwaetiti niile n’ebe ha dị.+ 15 Ndị eze ndị na-achị n’ụwa na ndị nọ n’ọkwá ukwu na ndị ọchịagha na ndị bara ọgaranya na ndị dị ike na ndị ohu niile na ndị niile nweere onwe ha agaa zoo n’ọgba nakwa n’oké nkume ndị dị n’ugwu.+ 16 Ha nọkwa na-asị ugwu na oké nkume ndị ahụ: “Dakwasịnụ anyị+ ma chebe anyị ka Chineke, onye nọ n’ocheeze ahụ, ghara ịhụ anyị,+ ka Nwa Atụrụ ahụ gharakwa iwesa anyị iwe ya,+ 17 n’ihi na oké ụbọchị ha ga-ewe iwe eruola,+ ònyekwa ka a ga-azọpụta?”*+
^ Kwọt bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Gụọ B14.
^ Dinarịọs bụ mkpụrụ ego ọlaọcha ndị Rom. Otu dinarịọs ka a na-akwụ onye e goro ọrụ ụbọchị. Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi.” Gụọ Nkọwa Okwu.
^ Ma ọ bụ “ònyekwa ga-eguzoli?”